WhatsApp mandany bateria be loatra amin'ny finday OnePlus sy Xiaomi | Androidsis
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, WhatsApp
Fanavaozana farany Ny WhatsApp dia mety hiteraka olana amin'ny telefaona marika sasany amin'ny Android. Amin'izao fotoana izao dia misy marika roa izay voakitika hatreto. Momba ny telefaona Xiaomi sy OnePlus, iza no mahita ny fomba ampiasain'ny kinova fandefasan-kafatra malaza amin'ny fanjifana herinaratra be loatra.
Fahombiazana tsy fahita firy ity, satria tsy fahombiazana ny fanavaozana ny WhatsApp. Saingy amin'ity tranga ity dia ireo mpampiasa manana maodelin'ireo marika sinoa roa ireo no mijaly toy izany koa. Ny fampiharana dia mandany ny bateria amin'ny tranga maro, olana manokana manelingelina.
Ny mampiakatra ny ahiahy dia ny tsy fahombiazana izay misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny maodely Xiaomi sy OnePlus. Tsy maninona na telefaona vao haingana na manana Android 10 na kinova taloha. Amin'ny tranga rehetra, rehefa nahazo ny fanavaozana WhatsApp, mihaona amin'ny fanjifana bateria be loatra ao amin'ilay fitaovana izy ireo.
Ny fanjifana bateria ateraky ny fampiharana dia goavambe. Amin'ny tranga sasany izay notaterina hatreto, nilaza fa nahatratra hatramin'ny 40% ny bateria. Ka ho an'ny mpampiasa maro dia olana lehibe io rehefa mampiasa telefaona findainy.
Avy amin'ny WhatsApp dia mbola tsy nisy fanehoan-kevitra hatreto. Angamba, efa fantatr'izy ireo izany olana izany ary efa misy ny vahaolana hatrehana, izay azo antoka fa hivoaka amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao. Mampalahelo fa tsy fantatray hoe mandra-pahoviana no hahavitan'ny vahaolana sahala amin'izany amin'ireo mpampiasa.
Ny hany vahaolana hatreto dia ny fametrahana kinova WhatsApp taloha amin'ny telefaona, na mampiasa beta. Amin'ireto tranga roa ireto dia ara-dalàna ny fihinanana bateria amin'ny fampiharana. Ka, ho an'ireo mpampiasa amin'ny telefaona Xiaomi sy OnePlus Mety ho safidy tsara ny mandinika, izay hisoroka olana maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » WhatsApp dia mandoaka ny bateria amin'ny telefaona Xiaomi sy OnePlus
Samsung Galaxy A70 dia nohavaozina miaraka amin'ny endri-javatra 'Link to Windows' sy USB-C headphone support